Fa inona no mpahita? Archives - Fanisana ho an'ny fanjakana
Category Archives: Fa inona no mpahita?
Ny fisehon'i Jesosy, Ilay Reninay ary St. Joseph hatrany amin'i Edson Glauber, roa amby roapolo taona, ary ny reniny, Maria do Carmo, dia nanomboka tamin'ny 1994. Izy ireo no nantsoina ho fisehoana Itapiranga, nomena anarana taorian'ny tanànany teratany tany amin'ny alan'i Amazon Breziliana. . Ilay Maria Virjiny dia nilaza ny tenany ho "Queen of the Rosary and of Peace," ary ny […]
Tokony ho tamin'ny taona 1997, dia nisy lehilahy sy vehivavy iray tany Kalifornia, izay niara-niaina tamin'ny fotoan'ny ota, nanana fiovam-po lalina tamin'ny alàlan'ny Famindrampon'Andriamanitra. Nampandrenesina tany anaty vady ny vadiny hanomboka vondrona rosary rehefa avy nandinika ny novena Divine Mercure voalohany. Fito volana aty aoriana dia tsangambato an'ny Our Lady of the Immaculate Heart […]
Mikasika ny Pretra, Exorcist, Mpanorina ary Mpianatry ny Mpisoronabe ao amin'ny Saint-Benedict Joseph Labre (naorina tamin'ny 2012) tamin'ny 23 aprily 2020, dia nosoratan'i Fr. Nampahafantatra anay i Michel Rodrigue fa ny evekany, Rev. Gilles Lemay, dia tsy manohana an'i Fr. Ny hafatr'i Michel; hoy izy tamin'ny Fr. Raha nanoratra i Michel, dia tsy manohana ny hevitra hoe “ny […]
Tamin'ny 1992, nanomboka nihaona tamin'ny namany i Marco Ferrari hivavaka amin'ny Rosary ny asabotsy hariva. Tamin'ny 26 martsa 1994 dia naheno feo iray izy nilaza hoe "Anaka, manoratra!" «Ry malala, zanako malala, aza matahotra, Izaho [reninao], manorata ho an'ny rahalahinao sy anabavinao rehetra». Ny fisehoana voalohany ny "Renin'ny fitiavana" ho toy ny […]
Ny mystic poloney Alicja Lenczewska dia teraka tany Warsaw tamin'ny 1934 ary maty ny taona 2012, ny fiainany matihanina dia natokana ho mpampianatra sy talen'ny mpiara-miasa ao amin'ny sekoly iray any avaratrandrefan'i Szczecin. Niaraka tamin'ny rahalahiny, izy dia nanomboka nandray anjara tamin'ny fivorian'ny Fanavaozana Charismatic Katolika tamin'ny 1984 taorian'ny fanarahana ny […]
Italia (1930-2011) Mpisoronabe, Mistery ary Mpanorina Ny Mpikambana Miangavy an'i Marian Ity manaraka ity dia ampifanarahana, amin'ny ampahany, avy amin'ny boky, NY FAMPANDROSOANA: Fijoroana vavolombelona sy faminaniana momba ny fanoratana ny fieritreretana, p. 252-253: Mompera Stefano Gobbi dia teraka tany Dongo, Italia, avaratr'i Milan tamin'ny 1930 ary maty ny taona 2011. Amin'ny maha-olon-tsotra azy, dia nahavita fiantohana izy […]
(1913-1985) Ny vady, ny reny, ny mystic ary ny mpanorina ny fihetsiketseham-pitiavana Elizabeth Szántò dia mystika myrika teraka tany Budapest tamin'ny 1913, izay niaina fiainana nahantrana sy sarotra. Zanany lahimatoa izy ary hany tokana teo akaikin'ny zandriny mirahalahy enina mirahalahy izay ho velona amin'ny maha-olon-dehibe azy. Rehefa dimy taona dia maty ny rainy, […]
I Jennifer dia renim-pianakaviana amerikanina tanora sy vadim-pianakaviana (ny anarany farany dia notazonina tamin'ny fangatahan'ny talen'ny ara-panahy mba hanajana ny fiainana manambady sy ny fianakaviany.) Izy angamba, izay mety ho nantsoin'ny olona hoe "mahazatra" Katolika mandeha amin'ny alahady izay tsy nahalala firy momba ny finoany ary zara raha kely aza momba ny Baiboly. Nieritreritra tamin'ny iray izy […]
Miseho any Trevignano Romano, Italia Ny vaovao hita maso an'i Marian tany Trevignano Romano any Italia ho Gisella Cardia dia vaovao. Nanomboka tamin'ny taona 2016 izy taorian'ny fitsidihana azy tany Medjugorje, Bosnia-Herzegovina, ary nividy sarivongana an'ny Our Lady, izay nanomboka nitomany ra. Ireo fisehoana ireo dia efa lohahevitry ny nasionalista italiana […]
Ireo izay mbola tsy nahare fampidirana mety amin'ireo fanambarana momba ny "Fanomezana fiainana amin'ny sitrapon'Andriamanitra," izay natolotr'i Jesosy an'i Luisa indraindray dia diso fanantenana amin'ny zotom-pon'ireo izay nanana an'io fampidirana io: "Nahoana no manamafy be ny hafatr'ity vehivavy lainga ity avy any Italia izay […]